महिनावारी सुक्यो ? सावधान ! पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनसक्छ (भिडियोमा) - Kendrabindu Nepal Online News
महिनावारी सुक्यो ? सावधान ! पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनसक्छ (भिडियोमा)
राष्ट्रिय, विशेष, समाचार, स्वास्थ्य
बर्षेनी धेरै महिलाहरु क्यान्सरको कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यसको प्रमुख कारण हो सर्भाइकल क्यान्सर । यो पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर हो । पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने कारणहरु धेरै भए पनि मुख्य कारण भनेको कम उमेरमा विवाह हुनु, धेरै बच्चा जन्माउनु, जन्मान्तर कम राखेर बच्चा जन्माउनु, धेरै जना सेक्सुअल पार्टनर बनाउनु आदि हुन् ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम महिनावारी सुकेपछिका महिलाहरुलाई बढी हुने गर्दछ । क्यान्सरको उच्च जोखिममा उमेर ढल्कदै गरेका महिलाहरु बढी पर्ने हुँदा विशेष सावधानी अपनाउनु विशेषज्ञहरुको सुझाव छ ।
मोरङ सहकारीमा कार्यरत प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाह महिनावारी सुकेका महिलाहरुलाई विषेश ध्यान दिन आग्रह गर्दछन् । महिनावारी सुकेपछिका महिलाहरुले के कस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ? कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा डा. शाहले दिएको जानकारी तलको भिडियोमाः
विश्वकै टाउको दुखाई बन्दैछ यो रोग, कसरी जोगिने ?
अव केही प्रश्नमै गुगलले डिप्रेसन पत्ता लगाउने